Momba anay - Chengdu Silike Technology Co., Ltd.
Chengdu Silike Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 2004, any NO.336, CHUANGXIN AVE, QINGBAIJIANG INDUSTRIAL, CHENGDU, CHINA, izay manana birao any Guangdong, Jiangsu, Fujian ary faritany hafa.Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manana velaran-javamaniry maherin'ny 20000 m2 miaraka amin'ny laboratoara tsy miankina 3000m2, ny fahafaha-mamokatra 8000 Ton / Taona.
Amin'ny maha-mpanova sy mpitarika amin'ny fampiharana ny silicone ao Shina eo amin'ny sehatry ny fingotra-plastika, Siliike dia nifantoka tamin'ny fampidirana ny silicone sy ny plastika nandritra ny 20 taona mahery, nitarika ny fampifangaroana ny silicone sy ny plastika, ary ny fampivoarana Multi-functional. silicone additives ampiharina amin'ny kiraro, tariby & tariby, fiara anatiny trims, ary Telecommunication fantsona, plastika sarimihetsika, injeniera plastika....sns.Tamin'ny taona 2020, i Silike dia nahomby tamin'ny famolavolana fitaovana vaovao ho an'ny fitambaran'ny silikônina-plastika: Si-TPV silicone-based thermoplastic elastomers, taorian'ny fambolena lalina sy fikarohana ara-teknika nandritra ny fotoana maharitra tamin'ny sehatry ny famatorana plastika-silikonina.
Taorian'ny taona maro ny vokatra R&D fanavaozana sy ny fampandrosoana ny tsena, ny vokatra an-trano tsena anjara mihoatra ny 40%, ny fananganana ny mandrakotra ny Amerika, Eoropa, Oseania, Azia, Afrika sy ny faritra hafa amin'ny varotra iraisam-pirenena tsena, vokatra dia aondrana any amin'ny firenena maro. any ampitan-dranomasina, nahazo fiderana niraisan’ny mpanjifa.Ankoatr'izay, Siliike dia nanangana fiaraha-miasa akaiky tamin'ny anjerimanontolo ao an-toerana, ivon-toeram-pikarohana, anisan'izany ny Sichuan University, ny National Synthetic Resin Center ary ny vondrona R&D hafa, ary miezaka ny hanome ny mpanjifanay amin'ny vokatra avo lenta kokoa sy avo lenta!
Manavao ny organo-Silicone, manome hery vaovao
Lasa mpanamboatra silikônika manokana indrindra manerantany, sehatra Enterprise ho an'ny strivers
1. Fanavaozana ara-tsiansa sy teknolojia
2. kalitao avo lenta sy fahombiazana
3.Ny mpanjifa aloha
5.Fahamarinana sy andraikitra